MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2015-02-15
ပူတာအိုတပ်ရင်းမှ ဆွမ်ပရီယန်ကျေးရွာဒေသခံများအား သတ်ဖြတ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်
ပူတာအိုခရိုင်အတွင်းရှိ ဆွမ်ပရီယန်ဒေသခံများ၏ အိမ်များအား ခလရ (၄၆) တပ်ရင်းမှ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်း သေနတ်များဖြင့် ပစ်ခတ်ပေးခြင်းသာမကဒေသခံများကိုလည်း ခြိမ်းခြောက်စစ်ဆေးမှုများလည်း ရှိသည့်အတွက် ဒေသခံများ ကြောက်ရွှံ့နေကြပြီး စိတ်မလုံခြုံ သလိုခံစားနေရကြောင်း ဒေသခံများမှဆိုသည်။
“ဒီတစ်ခေါက်က ဘာမှမလုပ်ဘူး။ နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လာရင်တော့ ရွာမီးရှုမယ်။ ရွာသားတွေအကုန်လည်းကို သတ်လိုက်မယ်။ ” ဟု ပူတာအိုဒေသခံတပ်ရင်း ခလရ (၄၆) မှတပ်သားများမှ ဆိုကြောင်း ဆွမ်ပရီယန်ဒေသခံများမှဆိုသည်။
at 2/21/2015 11:58:00 AM No comments:
အစိုးရတပ်ရင်းများမှ ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် အောင်ဘာ ပရင်းမှော်လုပ်သားများနေရပ်ပြန်
အစိုးရတပ်ရင်းများမှ တနိုင်းဒေသအောင်ဘာပရင်းမှော်သို့ သွားရာလမ်းများတွင် ပိတ်ပင်မှုကြောင့် ပရင်းလုပ်ကိုင်နေသူများ အခက်အခဲများစွာရှိလာသည့်အတွက် အချို့အလုပ်လာလုပ်ကိုင်သူများ ပစ္စည်းသိမ်းပြီး နေရပ်ပြန်နေကြကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
“ မှော်တော့မပိတ်ဘူး။ လမ်းမှာပိတ်လိုက်တော့ လူလည်း မှောကိုသွားလို့မရဘူး။ အစားအသောက်တွေလည်း သယ်လို့မရတော့ ။ ဟိုမှာအစားအသောက်ခက်ခဲလာပြီး အချို့က ပြန်လာကြတယ်။”ဟု ဒေသခံ ကိုနော်ဆိုင်းမှဆိုသည်။
လတ်တလော တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက စစ်အုပ်ချုပ်ရေး အမိန့် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအမိန့်ဟာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အတည်ပြုပြီး ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်နေ့ ကစပြီး အတည်ဖြစ်ပါတယ်။
ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာ “ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသတွင် မူလအခြေအနေသို့ အမြန်ပြန်လည် ရောက်ရှိစေခြင်းငှာ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်” လို့ ပါရှိပါတယ်။
at 2/21/2015 11:55:00 AM No comments:
ကိုးကန့်ဒေသ လောက်ကိုင်မြို့တ၀ိုက် တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက် ဒေသခံတွေ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်အဖြစ် မြန်မာပြည်တွင်းနဲ့ တရုတ်နယ်စပ် ဖက်ကို ထွက်ပြေးနေကြရာမှာ အခုဆိုရင် ဒုက္ခသည် စုစုပေါင်း ၉သောင်းလောက် ရှိသွားပြီးလို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ ဆက်သွယ်စုံစမ်း ထားတဲ့ ကိုဉာဏ်ဝင်းအောင်က ပြောပြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စုနေ့ကစပြီး လောက်ကိုင်မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အစိုးရနဲ့ ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA တို့ကြား တိုက်ပွဲတွေကြောင့် လားရှိုး ကွမ်လုံ ချင်းရွှေဟော် မန္တလေး စတဲ့ မြန်မာပြည်တွင်း ဒေသတချို့နဲ့ နယ်စပ်တလျှောက် တရုတ်ပြည်ဖက်ခြမ်း အထိ ထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့ ဒုက္ခသည် စုစုပေါင်း ၉ သောင်းလောက် ရှိသွားပြီလို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ရဲ့ လောက်ကိုင်မြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်နီနိုင်က VOA ကို ပြောပါတယ်။
at 2/21/2015 11:52:00 AM No comments:
at 2/21/2015 11:51:00 AM No comments:
at 2/21/2015 11:50:00 AM No comments:
ကိုးကန့်ဒေသကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသအဖြစ်မှ ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းမည် မဟုတ်ဟု ဦးအောင်မင်းပြော
လတ်တလော တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသည့် ကိုးကန့်ဒေသများ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသအဖြစ်မှ
ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမည် မဟုတ်ဟု သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ပြောကြားသည်။
၎င်းက ''ဒီနယ်မြေ အေးချမ်းသာယာသွားပြီဆိုရင် ဒါပုံစံတကျပြန်လုပ်ရမှာပဲ။ ဒါကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသ ပြန် ဖွဲ့ရမှာပဲ'' ဟု ပြောသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂ဝ ရက်က ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးအပြီး သတင်းမီဒီယာများ၏ မေးမြန်းချက်ကို ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက အထက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။
at 2/21/2015 11:49:00 AM No comments:
at 2/19/2015 10:30:00 PM No comments:
at 2/19/2015 10:29:00 PM No comments:
တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း လောက် ကိုင်မြို့တ၀ိုက်မှာ အရပ်သား တစ်ထောင်ကျော်လောက် ပိတ်မိနေသေးတယ်လို့ ကွမ်လုံမြို့အခြေစိုက် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေသူ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
မြန် မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအဖွဲ့နဲ့အတူ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အကူအညီပေးနေတဲ့ ကွမ်လုံမြို့ အခြေစိုက် ဓမ္မစကူးကျောင်းက ဆရာမ မချစ်မီးက ကျန်နေသေးတဲ့အရပ်သားတွေဟာ လောက်ကိုင်မြို့နဲ့ အနီးတ၀ိုက်က ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတစ်ခုမှာ ခိုလှုံနေကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
at 2/19/2015 10:28:00 PM No comments:
at 2/19/2015 10:26:00 PM No comments:
at 2/19/2015 09:01:00 PM No comments:
ကိုးကန့်ဒေသ ကို ပြန်လည်ချုပ် ကိုင်နိုင်အောင် ဖုန်ကြား ရှင်ခေါင်းဆောင် တဲ့ ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့က စစ်ဆင်နေပါတယ်။ ပလောင် (ခေါ်) တာအာန်းနဲ့ ရခိုင်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေလည်း ဖုန်ကြားရှင်အဖွဲ့ကို ကူညိနေကြောင်း သိရပါတယ်။ ကိုးကန့်က ထွက်ပြေးတိမ်ရှောင်သူဦးရေ တိုးပွားနေပါတယ်။ ဖုန်ကြားရှင်နဲ့ လက်ထောက်ဖြစ်သူ ပိုင်ဆုံချိန်တို့ ပဋိပက္ခဖြစ်ရာက ကိုးကန့်ပြဿနာ စခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၉ မှာ အစိုးရတပ်ရဲ့  ထိုးစစ်ကြောင့် ဖုန်ကြားရှင်အဖွဲ့ အရေးနှိမ့်ခဲ့ပြီး ယူနန်မှာ ခိုလှုံနေတုန်း ပိုင်ဆုံချိန်ဟာ အစိုးရတပ်ရဲ့  လက်အောက်ခံ နယ်ခြားစောင့်တပ်နဲ့ ကိုးကန့်ဒေသရဲ့  အကြီးအကဲ ဖြစ်လာပါတယ်။
at 2/19/2015 08:59:00 PM No comments:
ပြည်ထောင်စုညီလာခံကျင်းပရန် အစိုးရကို ၀ိုင်းဝန်းတိုက်တွန်း
ဒီမိုကရေစီရေး၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆွေးနွေး အဖြေရှာနိုင်အောင် အစိုးရက ပြည်ထောင်စုအဆင့်ညီလာခံတရပ်ကျင်းပဖို့ တိုင်းရင်းသားအင် အားစုတွေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေက တိုက်တွန်းတောင်းဆိုပါတယ်။
ယူအန်အေ (စည်းလုံးညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ မဟာမိတ်အဖွဲ့) နဲ့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့ စတဲ့ အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၃၃ ဖွဲ့က ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ – ၁၉ ရက်နေ့ထိ ရန်ကုန်မှာ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး သဘောထားကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
at 2/19/2015 08:57:00 PM No comments:
at 2/19/2015 06:39:00 PM No comments:
ကိုးကန့်တိုက်ပွဲများအတွင်း KIA ပါဝင်ခြင်း မရှိကြောင်း ငြင်းဆို
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း လောက်ကိုင် ဒေသတွင် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲများ၌ ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA ) အနေဖြင့် လုံးဝ ပါဝင်ပတ်သက်မှု မရှိကြောင်း KIA ၏ တာဝန်ရှိသူများက ပြောဆိုသည်။
“ကိုးကန့်တွေနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေ မှာ ကျနော်တို့ KIA အနေနဲ့ လုံးဝ ပါဝင်ပတ်သက်မှု မရှိပါဘူး၊ လောက်ကိုင်ဒေသနဲ့ ကျနော်တို့က အဝေးကြီးပါ” ဟု KIA ၏ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးလာနန်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
at 2/19/2015 06:36:00 PM No comments:
၁ လပြည့် ကချင်ဆရာမ ၂ ဦးအတွက် အစာရှောင်ဆုတောင်းပွဲ ပြုလုပ်
ကချင်ဆရာမ ၂ ဦး အသတ်ခံရတဲ့ ၁ လပြည့် ၂၄ နာရီ အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်ကို မြန်မာနဲ့ကမ္ဘာတ၀န်း ပြုလုပ်နေတယ်လို့ ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် အသင်းချုပ် အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာဆမ်ဆန်က ပြောပါတယ်။
၁ လပြည့်တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက် မနက် ၆နာရီကနေ နောက်တနေ့ မနက် ၆ နာရီထိ ၂၄ နာရီ ၀တ်ပြုဆုတောင်းကြမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
at 2/19/2015 03:56:00 PM No comments:
တရုတ်နှစ်ကူး တပတ်အလို ကိုးကန့်ရဲ့ မြန်မာအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ် တပ်မတော်(MNDAA) ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဖုန်ကြားရှင် ကိုးကန့်ဒေသတွင်းမှာ အစိုးရတပ်တွေကို အပြင်းအထန် တိုက်ပွဲဆင်ပါတယ်။ ဖုန်ကြားရှင်ဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ကိုးကန့်အရေးအခင်းအတွင်း အာဏာလက်ကိုင်ရှိခဲ့ရာက မောင်းထုတ်ခံခဲ့ရချိန်ကစပြီး လူမြင်ကွင်းက ပျောက်နေခဲ့တယ်။ ကိုးကန့်ဒေသကို ဖုန်ကြားရှင် ပြန်ထိန်းချုပ်နိုင် မနိုင် လတ်တလော မသေချာပေမယ့် ဖုန်ကြားရှင် ပြန်ပေါ်ထွက်လာမှုနဲ့ ပြန်ဖြစ်လာတဲ့ ပဋိပက္ခတွေဟာ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အကြီးအကျယ် မရေရာမှုတွေ ထပ်ဖြစ်စေပြီး ကျင်းပတော့မယ့် ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း ထိခိုက်နိုင်တဲ့ အလားအလာ ရှိနေပါတယ်။
at 2/19/2015 12:19:00 PM No comments:
အားလုံး သိကြပြီဖြစ်တဲ့အတိုင်း ခုဆိုရင် ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသဟာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက် ကျရောက်သွားပါပြီ။ ဒီကြားထဲ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းတွေထဲမှာလည်း စိုးရိမ်စရာ ထိတ်လန့်စရာ သတင်းတွေ တွေ့လာရပါတယ်။ ဘာသတင်းတွေလဲ၊ ဘယ်လို စိုးရိမ်စရာကောင်း သလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
တိုက်ပွဲကာလ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက် က တပ်မတော် (မြဝတီ) ရဲ့ သတင်းထုတ် ပြန်ချက်မှာခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်။
at 2/19/2015 12:17:00 PM No comments:
at 2/19/2015 12:16:00 PM No comments:
at 2/19/2015 11:18:00 AM No comments:
at 2/19/2015 11:16:00 AM No comments:
လုံထန်းကျေးရွာ တိုက်ပွဲ တွင် ဗိုလ်ကြီးစည်သူအောင်ကျဆုံး
လုံထန်းကျေးရွာအနီးမှာ လုံခြုံရေး ယူထားတဲ့ တပ်မ (၁၁) တပ်မတော်သားတွေကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ရက် မွန်းလွဲ ၁နာရီ ၄၀ မိနစ်ခန့်က တခြား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက လာရောက်ပစ်ခတ်လို့ တပ်မတော်က ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူ ရဲစည်သူအောင် ကျဆုံးသွားတယ်လို့ ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားရာနဲ့ နီးစပ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က ဒေသခံတွေ ဆီကနေ သိရှိရပါတယ်။
ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူ ရဲစည်သူအောင်ရဲ့ ဦးခေါင်း ကျည်ဆံထိမှန်ပြီး ဒုတိယ တပ်ကြပ်တစ်ဦး မေးရိုးမှာ ကျည်ဆန် ထိမှန်ခဲ့တာကြောင့် ကွမ်းလုံမြို့ အရပ်ဘက်ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ကုသရာ ညနေ ၅ နာရီကျော်မှာ ဗိုလ်ကြီး ရဲစည်သူအောင် ကျဆုံးတယ်လို့ သူတို့ဆီကနေ သိရှိရပါတယ်။
at 2/19/2015 09:43:00 AM No comments:
အစိုးရက BGFများ၏ သေနတ်ဟောင်းများအား ဖုန်ကျားရှင် တို့ထံမှ သိမ်းဆီးရသည်ဟု ပြည်သူများအား လိမ်ညာ
ဗမာ့တပ်မတော်ရဲ့ လက်အောက်ခံ (BGF)အဖြစ် ယူနီဖောင်းဆင်၊
ဘက်တံဆိပ်တပ်၊ လခနဲ့ ရာရှင်ပေးထားတဲ့ BGF နယ်ခြား စောင့်
တပ် တပ်ရင်း အမှတ် ( ၁၀၀၆ )မှ စစ်သည်အများအပြားတို့သည်၎င်း
တို့ အား မြန်မာ စစ်တပ်က တပ်ဆင်ပေးထားသော သေနတ် အစုတ်
များ နှင့် ယူနီဖေါင်းများအား ချန်ခဲ့ ပြီး ဦးဖုန်ကျားရှင်းဦးဆောင်သော ကိုး
ကန့် အဖွဲ့ထဲသို့ ထွက်ပြေးသွား ကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ထို့ အပြင် မြန်မာ စစ်တပ်၏ နယ်ခြားစောင့်တပ် တပ်ရင်း (၁၀၀၆)တပ်မှ
တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူးအဆင့် ရှိသူ ယန်ရှောက်ကျင်းက မိမိ၏ကျန်တဲ့တပ်ရင်း
တရင်းလုံးခေါ်ပြီးဦးဖုန်ကျားရှင်း ဦးဆောင်သော MNDAA အဖွဲ့သို့ ကူး
ပြောင်းသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံ သတင်းရရှိပါသည်။
at 2/19/2015 09:42:00 AM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် ကာမိုင်းမြို့နယ်ခွဲ ကပ်မှော်ဇွပ်ကျေးရွာအနီးမှာ အစိုးရ စစ်ယာဉ်တန်း တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက် အနီးဝန်းကျင်က ခရီးသွား တစ်ဦးသေဆုံးပြီး တစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့ ကချင်ပြည် နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
ဖားကန့်ကနေ မိုးကောင်းကိုလာတဲ့ စစ်ယာဉ်တန်းဟာ မနေ့က တိုက်ခိုက်ခံရတာ ဖြစ်တယ်လို့ ကချင်ပြည်နယ် ဒုတိယရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီး ဦးချစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
at 2/19/2015 09:22:00 AM No comments:
လောက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွင် တရုတ်ကြေးစားတပ်များ ပါ/မပါ သိအောင်လုပ်ဖို့လိုသည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
လောက်ကိုင်ဒေ သ ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ကိုးကန့် အမတ်တို့ ဖောင်ဒေး ရှင်းထောင်မည်
နေပြည်တော် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ရက်သတ္တပတ်ကျော် ကြာမြင့်လာပြီး နှစ်ဘက်အကျအဆုံး များစွာရှိနေသဖြင့် ရက်ပေါင်းကိုးဆယ် စစ်အုပ်ချုပ်ရေး နယ်မြေအဖြစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်က သတ်မှတ်လိုက်ရသော လောက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွင် ကိုးကန့် အဖွဲ့ဘက်မှ တရုတ် ကြေးစားတပ်များ ပါဝင်မှု ရှိ/မရှိ သိအောင်လုပ်ဖို့ လိုသည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။
လောက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွင် ကိုးကန့်တပ်များဘက်က တရုတ်ကြေးစားတပ်များပါ ဝင်တိုက်ခိုက်နေသည်ဟု သတင်းများ ပေါ်ထွက်နေမှုကြောင့် တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး ထိခိုက်နိုင်ပါသလားဟု မဇ္ဈိမက ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက် နေ့လယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးအပြီး မေးခဲ့သည်ကို ''ဒီလို ပြောနေတာ တွေ (တရုတ်ကြေးစားတပ်တွေ ပါနေတယ်လို့ ပြောနေတာတွေ)ဟာ ဘယ်လောက် တိကျမှန်ကန်သလဲ၊ ဘယ်လောက် အခြေအမြစ်ရှိသလဲဆိုတာ သိအောင်လုပ်ဖို့က အရေးကြီးတယ်။ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် မလိုလား အပ်တဲ့ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်'' ဟု ၎င်းက ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
at 2/19/2015 09:20:00 AM No comments:
at 2/19/2015 09:18:00 AM No comments:
at 2/19/2015 09:16:00 AM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံကို အင်အားကြီးနိုင်ငံတို့၏ ပါဝါဂိမ်း ကစားရာ စစ်တလင်း အဖြစ်မခံသင့် - Tomorrow သတင်းအဖွဲ့
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေး စီးပွားရေးများ အရွေ့ပြောင်းများစွာ ဖြစ်နေချိန်တွင် ၂၀၁၅ခုနှစ် နှစ်စပိုင်းမှာပင် တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ငြိမ်သက်နေခဲ့သော တိုက်ပွဲကြီးများ ထူးဆန်းစွာ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ယင်းတိုက်ပွဲများမှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ အစိုးရတပ်များနှင့် ကိုးကန့် တိမ်းရှောင် အဖွဲ့များ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ပွဲများဖြစ်ကာ လက်ရှိအချိန်တွင် လောက်ကိုင်မြို့အား အစိုးရမှ ပုဒ်မ ၁၄၄ကို ထုတ်ပြန်ကာ ဒေသခံ ပြည်သူများအား လားရှိုး၊ မန္တလေးနှင့် တိုက်ပွဲများနှင့် ကင်းလွတ်ရာ နေရာဒေသ အသီးသီးသို့ ပြောင်းရွှေ့ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
at 2/19/2015 09:15:00 AM No comments:
at 2/19/2015 09:13:00 AM No comments:
“တအာင်း၊ ကိုးကန့် နှင့် တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် ပြည်တွင်းစစ်မီး ပိုမိုကြီးမားလာသည့် အခြေအနေ" သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
၁။ တအာင်း၊ ကချင်၊ ရှမ်း၊ ကိုးကန့် အပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး၏စရှိသည့် တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် မြန်မာအစိုးရ၏ စစ်အင်အားများ ပိုမိုတိုးချဲ့ ထိုးစစ်ဆင်နေခြင်းသည် ပြည်တွင်းစစ်မီးကို ပိုမိုတောက်လောင်စေပြီး၊ စစ်မှန်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဆန့်ကျင်သည့် လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ မြန်မာအစိုးရနှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ လက်ရှိ စစ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်သည် တပြည်လုံးအတိုင်းအတာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် ရရှိရန် ကြိုးပမ်းမှုကို ထိခိုင်စေသည့်အပြင် နိုင်ငံရေဿနာကို နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်မည့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်လာရန် အတွက်လည်း ကြီးမားသည့် စိန်ခေါ်မှု ဖြစ်စေပါသည်။ ပြည်တွင်းစစ်မီး ပိုမိုကြီးမားစေရန်အတွက် လိုအပ်သည့်ထက် စစ်အင်အားသုံးကာ လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသည့် နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းများကို လမ်းကြောင်းလွဲ ဖြေရှင်းရန် ကြိုးပမ်းသည့် မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်များ၏ လမ်းဟောင်းဗျူဟာ တစ်ရပ်သာ ဖြစ်သည်။
at 2/19/2015 09:11:00 AM No comments:
KIA Dung (6) Ni Hpakant-Mho Gaung Lam Dingyang Myen Hpyen Ni Hpe Bawm Hte Hkap Gasat
Febb 17, 2015 ya shani 10:00 am. ten daram hta Hpakant kaw na Modo (64) hte Mho Gaung de lai yu wa ai Tat.M-(66) kata na myen tai hpyen ni Nam Sheng hte Labang kahtawng lapwan na Gala Kawng kaw hkam bawm (2) wa kapaw la nna marai (10) lahta de si hkala hkrum mat ai lam shiga na chye lu ai.
Dai hpang, 12:10 pm ten daram hta Tat. M-(66) ni Modo Convoy hpung ni hpe lagaw lam hte shim lam la ya na matu shawng yu wa wa ni Hka San Lup Wa Kawng makau kaw tinang KIA ni hkam tawn ai bawm (1) bai wa kapaw la nna marai (3) si nna marai (7) ram bai hkala hkrum mat ai lam na chye lu ai.
at 2/18/2015 09:45:00 PM No comments:
Feb 17, 2015 ya shani 1:00 am.-7:40 am. laman hta Hpakant KIA Masat (2) Dap Ba npu Masat (6) Dap Dung ginra, Jan Mai Bum kaw nga ai myen asuya dap Hk.M.Y-(337) dap ni hpe tinang KIA Dung (6) Kung (1) na hpyen hpung ni KRA (1) sa gap bun ai kaw na Myen tai hpyen ni sinat kaji kaba hte gap shru ai lam shiga na chye lu ai. Tinang maga nah pa nra ai lam na chye lu ai.
KIA Masat (36) Dap Dung, Bang Sai, Kong Si Kaw Laja Lana Gasat Nga
Feb 18, 2015 ya jahpawt daw (9:45 am-10:15 am) lapran lahta Sam Mung KIA Masat (4) Dap Ba npu, Masat (36) Dap Dung ginra Bang Sai Ninghtawn, Kong Si kaw mying nchye shi ai Myen tai hpyen hpung ni hpe tinang KIA Dap Dung (36)na MHH Kung (5) myu tsaw share Ninghkring ni hkap tau gasat ai majaw gasat poi laja lana byin ai lam shiga na chye lu ai.
Si hkala shiga naw sagawn nga ai...
at 2/18/2015 09:44:00 PM No comments:
KIA Masat (36) Dap Dung, (105) Mile Makau Kaw Gsat, Myen (16) Si, (10) Jan Hkala
Mana Feb 17, 2015 ya shana 10:30 pm. ten ram hta lahta Sam Mung KIA Masat (4) Dap Ba npu, Masat (36) Dap Dung ginra Mung Yu Ninghtawn (105) Miles tai dap makau kaw tinang KIA Dung (36) na MKM ni Nga Rung Bawm (2) lang sa kapaw bun ai hta Myen dap maga na marai (16) ram si nna marai (10) jan hkala hkrum mat ai lam shiga na chye lu ai.
KIA Masat (36) Dap Dung hte Dap Ba (4) kata na Myu Tsaw share Ninghkring ni hpe shagrau sha-a ga law....kyu ja ja hpyi ya ga....shani shagu ngu na majan ni grau grai laja wa nga ai.
at 2/18/2015 09:16:00 PM No comments:
ကိုးကန့်ဒေသအတွင်း ဥပဒေချိုးဖောက်ပါက သေဒဏ်အထိချမှတ်မည့် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ထုတ်ပြန်
စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေငြာထားသည့် ကိုးကန့်ဒေသအတွင်း ပြစ်မှုကျူးလွန်ပါက စစ်ခုံရုံးဖြင့်စစ်ဆေးပြီး သေဒဏ်အ ထိအမိန့်ချမှတ်မည့် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ကို တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က လက်မှတ်ရေးထိုးကာ ဗိုလ် မှူးကြီး စောမြင့်ဦးကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ရက်တွင် တာဝန်ပေးအပ်လိုက်သည်။
ကိုးကန့်ဒေသကို စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်ရန် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ရက်တွင် သမ္မတအမိန့်ဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထံ အာဏာလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီး တစ်ရက်အကြာတွင် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချု ပ်၏ အထက်ပါအမိန့် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
at 2/18/2015 09:15:00 PM No comments:
ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ လောက်ကိုင်မြို့နယ်မှာ အစိုးရ တပ်မတော်နဲ့ ဖုန်ကြားရှင် ဦးဆောင်တဲ့ ကိုးကန့် တပ်ဖွဲ့တို့အကြား တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားနေပြီး နှစ်ဘက်စလုံးမှာ အထိအခိုက် အကျအဆုံး များပြားစွာ ရှိနေသလို၊ အရပ်သားတွေပါ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ သေဆုံးမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
အဲဒီလို တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ပိတ်မိနေတဲ့ အရပ်သားတွေနဲ့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေကို ကယ်ဆယ်ပြီး ပြန်လာတဲ့ ကြက်ခြေနီ ယာဉ်တန်း တခုဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့က လောက်ကိုင်-ချင်းရွှေဟော် ကားလမ်းတနေရာ လုံထန် ကျေးရွာ အနီးမှာ တိုက်ခိုက်ခံရပြီး ပြည်သူ ၂ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ယာဉ်တန်းမှာ ဧရာဝတီ ဓာတ်ပုံ သတင်းထောက် တဦးဖြစ်တဲ့ ကိုဂျေပိုင်လည်း လိုက်ပါလာပြီး အဲဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ သူ့ရဲ့ အတွေ့အကြုံကို အခုလို ပြန်လည် ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
at 2/18/2015 09:13:00 PM No comments:
အစိုးရ တပ်မတော်နှင့် MNDAA ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ကြား တိုက်ပွဲများ အရှိန်အဟုန်မြှင့်လာသဖြင့် စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကြေညာလိုက်ပြီးနောက် လောက်ကိုင်မြို့၌ ပိတ်မိနေသူများကို ကူညီ ကယ်ထုတ်ပေးနေသည့် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို ယနေ့တွင် ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လောက်ကိုင်-ချင်းရွှေဟော် ကားလမ်းတွင် ယမန်နေ့ကစပြီး တိုက်ပွဲများ အပြင်းအထန် ဖြစ်ပွားနေသဖြင့် လောက်ကိုင်မြို့၌ ပိတ်မိနေသူများကို ကားများဖြင့် လားရှိုးမြိုသို့ ကူညီပို့ဆောင်ပေးနေသည့် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များက ဧရာဝတီကို ပြောကြားသည်။
at 2/18/2015 06:23:00 PM No comments:
ဒုက္ခသည်ကယ်ဆယ်ရေးယာဉ် ထပ်မံပစ်ခတ်ခံရ၍ တဦးသေ တဦးဒဏ်ရာရ
ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကိုးကန့်ဒေသ၊ လောက်ကိုင်မြို့တွင် တိုက်ပွဲများကြောင့် ပိတ်မိနေသည့် ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားများကို တင်ဆောင်လာသော ကယ်ဆယ်ရေးကားကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီခန့်တွင် ထပ်မံပစ်ခတ်ခံခဲ့ရပြီး တဦးသေဆုံး၍ တဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
လောက်ကိုင်မြို့မှ လားရှိုးမြို့သို့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ တင်ဆောင်လာသည့် အပြာရောင်ကျောက်သယ်ကားသည် ချင်းရွှေဟော်မြို့နှင့် ၄ မိုင်ခန့်အကွာရှိ လုံထန်ကျေးရွာအနီးတွင် ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
at 2/18/2015 06:22:00 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံ ကိုးကန့်ဒေသမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ထောင်နဲ့ ချီတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ခရိုင်ထဲကို ၀င်ရောက်လာတယ်လို့ တရုတ် အစိုးရက ပြောပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်က စတင်ပြီး အစိုးရ စစ်တပ်နဲ့ မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ (MNDAA)တို့ တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း လုပ်ဆောင်ဖို့လည်း ထပ်မံ တောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့ ရိုက်တာ သတင်းက ရေးပါတယ်။
at 2/18/2015 06:21:00 PM No comments:
မြန်မာ့တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးတင်ဦးက ကိုးကန့်ဒေသ မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေဟာ ပြည်တွင်းက တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားနဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိနိုင်တယ်လို့ ဝေဖန်ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
at 2/18/2015 02:44:00 PM No comments:
at 2/18/2015 01:37:00 PM No comments:
at 2/18/2015 01:35:00 PM No comments:
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကိုးကန့်ဒေသ လောက်ကိုင်မြို့မှာ ဒီရက်ပိုင်းတွေအတွင်း တိုက်ပွဲတွေ ကြိုကြား ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီး လောက်ကိုင်မြို့တွင်း ၀င်ရောက်လာတဲ့ အစိုးရတပ်က အရပ်သားတွေကို ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်တာတွေ ရှိနေတယ်လို့ ကိုးကန့်အဖွဲ့က ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောပါတယ်။
ကွမ်းလုံမြို့နယ်က ကိုးကန့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တဦးကတော့ လောက်ကိုင်မှာ အရပ်သားသေဆုံးသူ ၄၀ ကျော် လောက်ရှိတယ်လို့ သိရကြောင်း ပြောဆိုသလို အစိုးရစစ်တပ်ဘက်ကတော့ အရပ်သားတွေကို သတ်ဖြတ်တာမရှိကြောင်း ငြင်းဆိုထားပါတယ်။ ကိုးကန့်ဒေသဘက်က အခြေအနေကိုတော့ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းရဲ့ သတင်းထောက် ကိုမိုးဇော်က သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
at 2/18/2015 09:26:00 AM No comments:
at 2/17/2015 10:35:00 PM No comments:
at 2/17/2015 08:03:00 PM No comments:
ပစ်ခတ်မှုတွေရပ်တန့်ရန် ကိုးကန့်တိမ်းရှောင်အဖွဲ့ ကမ်းလှမ်း
ကိုးကန့်ဒေသမှာ လတ်တလော ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့ ဦးဖုန်ကြားရှင် ဦးဆောင်တဲ့ ကိုးကန့်တိမ်းရှောင်အဖွဲ့က သမ္မတထံ ကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက် နေ့စွဲနဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ ပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကိုးကန့်ဟာ ပြည်ထောင်စုထဲက တိုင်းရင်းသားတမျိုးဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားကြောင်း၊ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြန်ကာ နိုင်ငံတော်က ပေးအပ်တဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားကို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လိုကြောင်း စာထဲမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်နှစ်ကျော်က ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့မှ ကိုးတန်းကျောင်းသူ မဂျာဆိုင်းအိန် သေဆုံးမှုကို တိုင်ကြားသော ဖခင် ဦးဘရန်ရှောင် အမှုရှုံးနိမ့်ကာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်က ထောင်ဒဏ် ၆ လ သို့မဟုတ် ဒဏ်ငွေ ၅ သောင်း ချမှတ်လိုက်သည်ဟု ဦးဘရန်ရှောင်က ပြောသည်။
ဖားကန့်မြို့ မှော်ဝမ်းရပ်ကွက်အုပ်စု (၁) ဆွမ်ငိုင်ယန်ကျေးရွာမှ အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် မဂျာဆိုင်းအိန် သေဆုံးမှုကို ဖခင်ဖြစ်သူ တိုင်ကြားခဲ့သည်ဟု အစိုးရ စစ်တပ်က တရားစွဲဆိုခဲ့ရာ ရုံးချိန်းပေါင်း ၅၅ ကြိမ်တွင် ဖားကန့်မြို့နယ် တရားရုံးမှ တရားသူကြီး ဦးထွန်းဦးက အမိန့်ချမှတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
at 2/17/2015 08:02:00 PM No comments:
ကိုးကန့်နယ်ခြားစောင့်တပ် ဦးဖုန်ကြားရှင်အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း
အစိုးရလက်အောက်ခံ ကိုးကန့်နယ်ခြားစောင့်တပ်ရင်းတစ်ရင်းဟာ အစိုးရတပ်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ဦးဖုန်ကြားရှင် ခေါင်းဆောင်တဲ့ ကိုးကန့်တိမ်းရှောင်တပ်တွေနဲ့ ပူးပေါင်း လိုက်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့က တပ်ရင်းမှူး ရန်ရှောင်ကျင့် ဦးဆောင်တဲ့ ကိုးကန့်နယ်ခြားစောင့်တပ် အမှတ် ၁၀၀၆ က တပ်ရင်းတစ်ခုလုံး သူတို့အဖွဲ့နဲ့ လာရောက်ပူးပေါင်း ခဲ့တယ်လို့ ကိုးကန့်တိမ်းရှောင်တပ်လို့ လူသိများတဲ့ မြန်မာအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ (အမ်အန်ဒီအေအေ) ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးထွန်းမြတ်လင်း က ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
at 2/17/2015 05:56:00 PM No comments:
တကျော့ပြန် တိုက်ပွဲများနှင့် လောက်ကိုင်မြို့ မြင်ကွင်း
ကွန်ကရစ်လမ်းများပေါ်တွင် စွန့်ပစ်ထားသည့် မော်တော်ယာဉ်တချို့၏ မှန်နှင့် ကိုယ်ထည်များ၌ ကျည်ဆန် ထိမှန်ထားသည့် အပေါက်ရာများကို အထင်းသားတွေ့နေရသည်။ လမ်းဘေးဝဲယာတွင် အခိုင်အမာ ဆောက်လုပ်ထားသည့် လူနေ ဆိုင်ခန်းများဖြင့် ပြည့်နှက်နေသော်လည်း အခန်းအားလုံးနီးပါး သော့ခတ် ပိတ်ထားကြသည်။ လူတဦးစ၊ နှစ်ဦးစ လှုပ်ရှား သွားလာနေသည်မှအပ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရာအားလုံးက တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်လျက်ရှိသည်။
တပ်မ ၃၃ မှ တပ်မတော်သားများ အပြည့်တင်ဆောင်ထားသည့် ကားနှစ်စီးဖြင့် မြို့တွင်းတွင် ကင်းလှည့်နေကြသည်။ မြို့လယ်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေး ကျောက်တိုင်အနီးတွင် အသင့်အနေထားဖြင့် လုံခြုံရေုးုယူထားသည့် တပ်မတော်သား တချို့တွေ့ရပြီး မြို့တွင်းသွားလာနေသည့် ကားများကို ရပ်တန့် စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
at 2/17/2015 05:55:00 PM No comments:
ကိုးကန့်တိုက်ပွဲတွင် အရပ်သားများကို သတ်ဖြတ်ခြင်းမရှိကြောင်း တပ်မတော်ငြင်းဆို
ကိုးကန့်တိုက်ပွဲတွင် နေအိမ်များ အတွင်းမှ ချောင်းမြောင်း ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် တပ်မတော် က တစ်အိမ်ချင်းစီတက်ရောက် ရှာဖွေ၍ နယ်မြေရှင်း လင်းရေး ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး အရပ်သားများကို သတ်ဖြတ်မှုလုံးဝမရှိကြောင်း တပ်မတော်က ငြင်းဆို လိုက်သည်။
ယူနန်သတင်းစာ က ကိုးကန့်တိုက်ပွဲများတွင် တပ်မတော်က အရပ်သားကိုးကန့်ဒေသခံများကို ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှုအချို့ရှိ နေကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက် က ဓာတ်ပုံများနှင့်တကွ ဖော်ပြခဲ့ သည်။
at 2/17/2015 03:17:00 PM No comments:
တရုတ်နိုင်ငံသားများ ဓာတုပစ္စည်းသုံးပြီး ကျောက်ရွှေထုတ်လုပ်မှု ယခုထိရှိနေဆဲ
၀ိုင်းမော်မြို့နယ် နောင်း ချိန်းကျေးရွာအနီး ဂျိန်းဖောမြေ ရွှေသတ္တု တူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီလီမီတက် လုပ်ကွက်တွင်ရောက်ရှိနေသည့် တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာသည့် တရုတ်နိုင်ငံသား အယောက် (၃၆)ဦးအား ဖမ်းဆီးအရေး ယူခဲ့ပြီဖြစ်သော် လည်း နောင်မွန်းကျေးရွာနားရှိ ကျောက်ရွှေမှော်သည် ယခုအထိ ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများ ထိုလုပ်ကွက်အား ရပ်ဆိုင်းပေးရန် သွားရောက်မောင်းထုတ် နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ထိုလုပ်ကွက်သည် တရုတ်နိုင်ငံသားများဖြင့် ထိုနေရာတွင် တောင်ဖောက်ကာ ဓာတုလက်နက်များအသုံးပြုပြီး လုပ်ကိုင်စားသောက်နေသည်မှာ သုံးနှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းလည်း ဒေသခံများဆိုသည်။
at 2/17/2015 03:04:00 PM No comments:
at 2/17/2015 02:30:00 PM No comments:
• ဝမ်းပျက်သံများကြောင့် အန်ချခြင်း
လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများမှာ ကိုးကန့်ဒေသ လောင်ကိုင် စစ်သတင်း ဆက်စပ်ဓာတ်ပုံတွေတက်လာတော့ လူတွေက ပြောကြတယ်။ မြို့ထဲက ဆိုင်းဘုတ်တွေကလည်း တရုတ်စာချည်းပဲတဲ့။
လောက်ကိုင်မှာ တရုတ်စာ ဆိုင်းဘုတ်တွေပဲ တွေ့ရမှာပေါ့။ အဲဒါ ကိုးကန့်တရုတ်နယ်ပဲကိုး။ မြန်မာစာဆိုင်းဘုတ် ဘာလို့ ရှိရမှာတုံး။
အွန်လိုင်းမှာ “ဒါလားဟဲ့ မြန်မာပြည်” မေးတဲ့ လုံးလျော့ ကျပ်မပြည့် ဒီမိုကရေစီ အမည်ခံများကို ပြန်ဖြေရရင် “မဟုတ်ဘူး” လို့ ဖြေရမှာပေါ့။ အဲဒါ ကိုးကန့် တရုတ်တွေရဲ့ ပြည်။ ကိုးကန့် တရုတ်တွေ ပိုင်တယ်။ မြန်မာပိုင် မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ မြန်မာစာပေ ထွန်းကားစရာမလိုဘူး။ သူတို့စာ၊ သူတို့စကား၊ သူတို့ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ ထုံးစံ သီးသန့်တည်ရှိ ထွန်းကားတာ ဘာဆန်းသလဲ။
at 2/17/2015 02:09:00 PM No comments:
at 2/17/2015 12:21:00 PM No comments: